Namuhla, ukunakwa kwakho izokwethulwa kunethiwekhi ye imitholampilo zamazinyo, enesihloko esithi "Usizo Dental" (Novosibirsk). Ngokwazi inhlangano muhle? Kungakhathaliseki kubalulekile lapha ukuze uxhumane uma izinkinga ngalo ingaphakathi ngomlomo? Yini amasevisi anikezwa ngu isikhungo? Qonda yonke lokhu kuyosiza Izibuyekezo eminingi mayelana inhlangano. Ungamangali uma kukhona engqubuzanayo - onjengendodana ochwepheshe, umuntu - akukho. Ngakho-ke, i-negative nayo hhayi ngaphandle. Yini okufanele ukwazi isakhamuzi eya wamazinyo?
"Dental Amasevisi" (Novosibirsk - idolobha lapho Inhlangano) - kuyinto yamazinyo yangasese. Kuyinto lonke inethiwekhi izinhlangano ezifanayo. Bonke asezindaweni Novosibirsk.
"Dental-service" - inethiwekhi ukuthi ungacela usizo uma izinkinga nge emazinyweni ngalo ingaphakathi ngomlomo. Inhlangano ngokukhethekile inkonzo umndeni. Lokhu kusho ukuthi kunodokotela abadala kanye nezingane. Lokhu isici ejabulisa. Kodwa onjani amasevisi kukhona etholakalayo? Lokho izakhamuzi odinga ukukwazi ngaphambi kokuba ubhalise lapha?
City, okuyinto iwuMnyuziyamu "zamazinyo-Service" - Novosibirsk. Kuyinto isikhungo esiyinhloko yesifunda, kukhona ngokwanele imitholampilo yezempilo yangasese. Ngakho-ke, abaningi bacabanga ukuthi ukunikela inhlangano ngayinye. Ngokwe-zinsiza, abanye ukungena ngenxa yesizathu esisodwa noma enye yezinto AmaCynic.
"Dental-Service" - is, njengoba kuye kwashiwo, udokotela wamazinyo umndeni. Inikeza uhla egcwele namasevisi ahlobene amazinyo futhi izifo ngomlomo. Phakathi nemisebenzi ezithandwa kakhulu ngalokhu kusikisela okulandelayo:
emkhakheni wezitho zokwenziwa;
ukwelashwa kwamazinyo (kuhlanganise ubisi);
efundisa inhlanzeko yomlomo;
enifeza yokuhlanza we ngalo ingaphakathi ngomlomo;
ekwelapheni isifo sezinsini izinyo (pulpitis, periodontitis nokunye);
izinyo koqweqwe lwawo enamathela zokuzivikela;
Ngakho, bobabili abadala kanye nezingane kungaba uthole uhlu oluphelele kunakekelwe amazinyo lapho kudingeka. Inzuzo enkulu, njengoba kuye kwashiwo - it is a focus umndeni: izakhamuzi nezingane kungaholela "zamazinyo-Service", bese elapha ngokwabo amazinyo ngaphandle kwezinkinga.
Kubalulekile ukuba wazi kahle hle bangaya kuphi ukuze bathole usizo. Into wukuthi study inhlangano - inethiwekhi kwemitholampilo. Ngakho, ungakwazi ukuthola ezimbalwa emagatsheni awo kuleli dolobha. Futhi aphathwe nomaphi elula. Leli qiniso has eminingi ejabulisayo - asikho isidingo ukuya komunye umkhawulo edolobheni ukuphathwa ngayo!
City, okuyinto iyisonto inethiwekhi ngokuthi "zamazinyo-Service" - Novosibirsk. Pediatric Dentistry (iphrofayli) yehlukile amagatsha omdala. Okuvame kakhulu umtholampilo jikelele. Abakwazi selashwe abadala kanye nezingane.
Ukuze ezinye izindawo, sicela uthintane izakhamuzi laseNovosibirsk ukuphathwa kanjani? amagatsha eziningana ezihlukene:
Blucher Street, Isakhiwo 30 - Centre Steel futhi isikhungo jikelele yezokwelapha;
Revolution Street, 10 - Iphrofayela jikelele .;
Street Heroes of Labour, Isakhiwo 4 - umtholampilo multidisciplinary;
Str. Lenina 17, -. Amazinyo Wezingane.
Lapho ncamashi isicelo - ukuzixazulula iklayenti. Lapho kuba lula kuwe, kukhona futhi ikhona indawo service. Vele khumbula ukuthi ongoti ezahlukene abasebenza emitholampilo ezahlukene. Ngokuvamile, lokhu yikona akusho dudula izivakashi.
Ukuze uthole i-aphoyintimenti ukubona udokotela, kudingeka contact kokuqala noma elinye igatsha. Umtholampilo "zamazinyo-Service", Novosibirsk - indawo lapho, njengoba abaningi bathi, engafinyelelwa ngaphandle kwezinkinga. Futhi nje uxhumane inhlangano, futhi, akunzima. Ngokwesibonelo, ngokusebenzisa ama-e-mail esemthethweni.
ngokuvamile legatsha ngalinye yakho yefoni. iklayenti ngamunye ezingaba ungathola ngokusebenzisa enhlanganweni kusukela inombolo eyodwa: 383 308 00 00. Ngaphezu kwalokho, u-opharetha kuyodingeka ukubika kusengaphambili lapho esibhedlela udinga ukubhalisa.
Njengoba enye - isikhalo nge-imeyili. Enye indlela yokuxhumana futhi urekhode kudokotela edilini lomshado - ifomu impendulo. Kuyinto kwi website esemthethweni yenhlangano. izinkomba okuhlukahlukene kubonisa ukuthi ukuqokwa udokotela kulula. Futhi kuyamjabulisa - ukuze uthole i-aphoyintimenti, ungabiza noma usuku noma esikhathini esizayo esiseduze, uma kungekhona izifiso likathishanhloko mayelana kudokotela wezifo ethile.
Adume kakhulu "zamazinyo-Service" (Novosibirsk)? Odokotela - nakhu okunye iphuzu, okuyinto samukelwa ku silinake ngokungathí sina. Ngokuvamile umsebenzi wenhlangano nokuduma salo encike ngqo kulokho abasebenzi ukukhonza izivakashi.
Umsebenzi "inkonzo zamazinyo" ikakhulu odokotela wemfanelo futhi wafundiswa. Ochwepheshe eliphakeme isigaba, wabaholi wesayensi yezokwelapha - bonke abasebenzi wodokotela bamazinyo, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko. Kukhona izifundiswa impela. Kodwa abaningi abathi bangabaphostoli ochwepheshe weqiniso, akukho ukumesaba.
Ngokuvamile, odokotela e-"zamazinyo-Service" - yindaba ehlukile. Kukhona ngokuvamile kuphakama ukuphikisana. Abanye odokotela ujabule, othile uthi izisebenzi ezimbi futhi bengenakho okuhlangenwe nakho zamazinyo. Noma kunjalo, imibono emihle. Akekho ogonyiwe kusuka ukwehluleka ukwelashwa - ke okufanele akhunjulwe ngayo. Yini ngokuvamile ukugxilisa ingqondo ukunakwa izivakashi lapho sisebenzelana ochwepheshe?
Inkolelo eyayivamile kakhulu kuvamile phakathi izilaleli disaffected - ukuqokwa okungaholela ekwelashweni okungadingekile. Leli phuzu kusebenza futhi abadala kanye nezingane. Ezinye iziguli ibonisa ukuthi ochwepheshe isikhungo "Amasevisi zamazinyo" (Novosibirsk) linqume eziningi izinqubo ezingadingekile.
Ngokwesibonelo, kukhona izikhalazo, okuyinto bathi kwangena indoda ethile la ukunciphisa ingane amatomu wentengo eyodwa, futhi lo dokotela ngokuthi omunye ngaphezu kwentengo, ngoba ngaphezu kudingeka izinzwa ezibizayo. Ngaphezu kwalokho, ingane eziningi inkinga emazinyweni nezinkinga izinsini. Ngakho esikhundleni ukwelashwa elilodwa lemali iya kwenye, edlulele okulindele. Ukuze ubone udokotela alikho "zamazinyo-Service" noma yiziphi izinkinga eziningi sengane sitholakale amazinyo akhe.
Ubufakazi ngokoqobo Izibuyekezo okunjalo akukhona ukuthuthumela, kodwa ngezinye izikhathi ungathola into efana nalokho. Kulesi ukuphathwa amazinyo exolisa ukuphendula lezi zinsolo. Ezinye seluleko: "Thembela, kodwa uqinisekise." Uma kukhona izinsolo ukuthi "zamazinyo-Service" inikezwa okungaholela ekwelashweni okungadingekile noma ayilungile, kutuswa ukuba uyidlale ephephile. Akekho ogonyiwe kusukela kwamacala. Ngenhlanhla, a esingaqondile njengaleso - into ezingavamile.
Iphuzu elibalulekile isimo isikhungo kwangasese. Kufeza indima ebalulekile kwabaningi. Phela, izivakashi kufanele kube ukhululekile esikhungweni esithile. Ngalesosikhathi they phinda kuze ngokuphindaphindiwe.
Ngenhlanhla, "zamazinyo-Service" (Novosibirsk) Izibuyekezo kule ndawo wathola ikakhulukazi omuhle. Njengezinye nezikhungo zezokwelapha yangasese, konke kwenziwa lapha induduzo izivakashi. Umoya wobungane yokukhanya, amakamelo elikhanyayo, ifenisha entsha, ahlanzekile, abasebenzi nice and imishini emisha - konke lokhu kuyakhanga. Hhayi umbono wokuthi umuntu amazinyo! Abaningi iphuzu yokuthi ngisho abentwana bafunda khona ama-Medical Centre bafundela ubumnandi futhi asesabi ukuya lapha!
Kodwa izinga lenkonzo akuzona ujabulile ngaso. Sikhuluma zokuxhumana zangaphambi esibhedlela nenhlangano. Ezinye izivakashi zibonisa ukuthi "zamazinyo-Service" (amazinyo, Novosibirsk) - indawo lapho ungakwazi ukufinyelela, lapho inkonzo kancane.
Eqinisweni, ukukholelwa abukho 100% engenakwenzeka. Lokhu izingcingo amazinyo ifoni uzama ukuphendula uma kukhona isikhathi. Kuphela uma ukusakaza aminyene izivakashi zingase unezinkinga zokuxhumana.
Ezinye izindaba zika-izinga lenkonzo nesivinini zisesikhathini par. iklayenti ngasinye unesibopho yonke imibuzo, ukusiza ukhethe udokotela, kulotshwe isikhathi esivumelana ngokuvakashela onguchwepheshe. Ayikho lezimanga nge amasu cha, uma udokotela ngasizathu simbe, awukwazi ukuthatha isiguli (isib, ukugula), abasebenzi ozama ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ushayele emuva ukwamukela uyavuma - noma ukukhansela noma ukuze uthumele noma inikeze ezinye amasevisi onguchwepheshe.
Umtholampilo "Amasevisi zamazinyo" (Novosibirsk) - ngokuvamile wamazinyo omuhle umndeni. imicabango yabantu Positive ngakho kakhulu kwesokunxele. Kodwa labo abangase babe abathengi ngokuvamile ayeke imibono Izibuyekezo ezingezinhle. Yini zingatholakala ku umbono emitholampilo?
Kuye kuthiwe ukuthi abanye babhekisela okungaholela ekwelashweni okungadingekile noma usole phakathi odokotela ngokwabo. Lona nje Ukuqagela, abangenalo ubufakazi. Ezinye ukwabelana emibonweni yabo mayelana yini isevisi best, ngesikhathi esifanayo baqinisekisa ukuthi ukuhleleka okuhle jikelele wafunda.
Ngokwesibonelo, "zamazinyo-Service" (Novosibirsk) ku Blucher 30 - lena kuncike njalo iningi ingxoxo. Ezinye akhononde abasebenzi kanye nodokotela. Ezinye imicabango yabantu ukuphakamisa hhayi umsebenzi sinembe kakhulu. Zwi hygienist olwenziwa hhayi kakhulu ngokucophelela temlomo yokuhlanza inqubo. Kodwa ngenkathi umphumela uye bathandile, washiya umbono omuhle mayelana umtholampilo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi anjalo - into evamile. Akekho ogonyiwe kusuka handling anolaka, nakuba kuyoba efiselekayo esibhedlela esizimele zazingekho izigameko ezinjalo. Into esemqoka ukuthi abaningi ziyaneliswa kuwumphumela yokuphathwa.
Kodwa mayelana intengo yamazinyo "Amasevisi zamazinyo" e Novosibirsk angawutholi Izibuyekezo engcono. Cishe zonke iziguli abonisa ukuthi isikhungo sezempilo usebenza ngamanani ingaphezulu kuka. Ngakho-ke, ukuvula lapha, udinga ukuba alungiselele imali.
Undercutting amatomu ingane yezindleko isilinganiso mayelana ruble 3500, yokuhlanza ngezinyathelo zenhlanzeko okwakufanele ngalo ingaphakathi ngomlomo - izinkulungwane 2-3 kokubonisana yezokwelapha (primary) - ruble 400, yesibili - 200, ekwelapheni caries ku omdala - 1 300. Ngo umkhuba, umthethosivivinywa isilinganiso yisiguli kuyinto ayizinkulungwane 3-4.
"Dental-Service", Novosibirsk (ingane noma umuntu omdala umtholampilo - ke akubalulekile kangako) - isikhungo wezokwelapha yangasese, esebenza kuso sonke isibalo sabantu ku imali ngesisekelo. Kuyinto kuqhathaniswa eqolo. A nesimnandi kwenza esabuya lapha kaningi.
Ezinye izivakashi akhononde inkonzo abampofu. Lilonke, iningi amakhasimende weneliseka yi yokugcina ukwelashwa. Waphenduka wabheka la "zamazinyo-Service", kumelwe sikhumbule ukuthi sonke sibhekana kulokho ngeke kuwele reception hhayi Lihle kakhulu, kodwa nakanjani uyazi udokotela wakhe ibhizinisi.
Pediatric Dentistry (Volzhsky) kanye izici zayo
Laser amazinyo mhlophe: ukubuyekezwa, amasu kanye Imiphumela
Toothpaste "Marvis". Incazelo, ukwakheka, ukubuyekezwa
Euxine: igama yesimanje. Umlando kwegama
Kuphi futhi kanjani ukunamathela tattoo flash
Umsebenzi Theatrical: incazelo
Cumin: izakhiwo ewusizo kanye contraindications